कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ११ साउन २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ११ साउन २०७५)
on: ११ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०९:३८ लगानी
कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ११ साउन २०७५)
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त कालिका माइक्रोक्रेटिड डेभलपमेण्ट बैङ्कले आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा रू. २ करोड ५९ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २ करोड २३ लाख नाफा कमाएको थियो । असार मसान्तसम्ममा रू. ६७ लाख १९ हजार खरा कर्जा उठाएकाले कम्पनीको नाफा बढ्न पुगेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २१ प्रतिशत बढेर रू. १० करोड पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ५ करोड ७३ लाख छुट्ट्याएको छ । कम्पनीको २०७४ फागुन १९ गतेको वार्षिक साधारणसभाबाट पारित २१ दशमलव २१ प्रतिशत बोनस शेयर आगामी हप्ता नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मीनबहादुर बोहराले बताए । कम्पनीले लघुवित्तको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्दै देशको गरीबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । आफ्नो सेवा थप प्रभावकारी बनाउन र जनतामा वित्तीय पँहुच बढाउन आगामी दिन सम्पूर्ण जिल्लामा शाखा कार्यालय स्थापना राखेर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
कम्पनीको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ४९ करोड ९० लाख निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. १ अर्ब २० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप ५५ प्रतिशत र कर्जा ५६ प्रतिशत वृद्धि हो । कम्पनीको लगानी रू. १० लाख रहेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू. ९ करोड ३६ लाख, कर्मचारी खर्च रू. ४ करोड ६० लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ३ करोड २० लाख र सञ्चालन नाफा रू. ३ करोड ४१ लाख रहेको छ । कम्पनीले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू. १ करोड ७८ लाख छुट्ट्याएको छ । स्थिर सम्पत्ति रू. ९७ लाख ५१ हजार र अन्य सम्पत्ति रू. १ करोड ६१ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा रू. ६७ लाख १९ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४७ प्रतिशत बढी हो । निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । पूँजी कोष पर्याप्तता १२ दशमलव ९६ प्रतिशत र पूँजी कोष लागत ९ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीले आगामी दिनमा कार्यक्रम विस्तार र गुणस्तर दुवै पक्षलाई साथै लैजाने नीति लिएको छ । सोहीअनुसार अब नयाँ क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दा लघुवित्त सेवाको पहुँच नपुगेको ठाउँलाई प्रथामिकता दिने र आफ्नो स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गरी दिगो रूपमा लघुवित्त सेवा दिने योजना रहेको कम्पनीले प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात ८ दशमलव ७५ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी रू. २५ दशमलव ९९, मूल्य आम्दानी अनुपात ५२ दशमलव शून्य ९ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ५७ दशमलव ३२ रहेको छ । बुधवारको शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे ८ गुणा बढी छ ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा फोर प्राइस डोजी आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले शेयरमूल्य घट्ने बढ्ने कुनै पनि निश्चित सङ्केत देखाउँदैन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई हेरेर लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा आरएसआइ न्युट्रल जोन (५० दशमलव ३३ स्केल)मा छ । यसले खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ११ दशमलव १५ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखीम हुने र प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाको बीचमा छ । बुधवारको शेयरमूल्य रू. १ हजार ३ सय ४९ बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. १ हजार ३ सय ७३ म प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. १ हजार ३ सय २४ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।